Wụnye Google Earth na Ubuntu 18.04 na nkwekọrịta | Site na Linux
Wụnye Google Earth na Ubuntu 18.04 na nkwekọrịta
Google Earth bụ mmemme na-enye anyị ụwa zuru ụwa ọnụ nke na-enye gị ohere ịga njem ọ bụla ịnọdụ ala na tebụl gị na-ele ọtụtụ ihe osise, dabere na foto satịlaịtị, foto nke ikuku, ozi gbasara ala site na ụdị data GIS sitere na gburugburu ụwa na ụdị kọmputa e kere eke.
You nwere ike inyocha ebe ọ bụla n’ụwa ọbụna na 3D na kwa ụwa. Nwere ike inyocha elu nke ọnwa na Mars, na ịchọpụta kpakpando nke abalị n'abalị.
Emere mmemme a n'okpuru aha EarthViewer 3D nke ụlọ ọrụ Keyhole Inc, nke ụlọ ọrụ Central Intelligence Agency kwadoro. Google zụtara ụlọ ọrụ ahụ na 2004 na-etinye ngwa ahụ.
Usoro ihe omume ahụ dị na ikikere dị iche iche, mana ụdị a na-akwụghị ụgwọ bụ nke kachasị ewu ewu, maka ngwaọrụ mkpanaka, mbadamba na kọmputa nkeonwe.
2 Etu esi etinye Google Earth na Ubuntu 18.04?
N'etiti njirimara nke mmemme a, anyị nwere ike ịkọwapụta na o nweela maapụ 3D na ha dum. Ọzọkwa, n'ime taabụ "Voyager" na Google Earth, nwere ike ịga dị iche iche na saịtị kwusara ụwa nketa nke ndi mmadu site UNESCO.
Akụkụ ọzọ nke Google Earth ọhụrụ a bụ ọrụ 'Aga m enwe obi ụtọ', ebe naanị otu ịpị, ikpo okwu ga-ebufe onye ọrụ ya na ebe ọ bụla na ebumnuche nke iju gị anya. Mgbe ị ruru ebe ahụ, Google nyere onye njem gị kaadị ozi nke ha nwere ike ịmatakwu banyere nkuku ebe ebugoro ha.
Nkọwa okwu n'asụsụ Bekee, Spanish, French na German.
Nwee njikọ na SketchUp, usoro ihe omume 3D nke enwere ike ibudata ụdị ụlọ 3D na Google Earth.
Ogwe njikwa na-egbochikwu akọ ma nweta ohere maka igosipụta ihe oyiyi.
Mmezi nke na-enye ohere lee ihe oyiyi 3D "ederede" (ihe ndị ọzọ kwesịrị ekwesị, windo, brik ...)
Site na njirimara Google Earth's Mars, ị nwere ike:
Lee foto ndị NASA sere dị nnọọ awa ole na ole gara aga na-ebi ndụ oyi akwa si Mars.
Mee mkparịta ụka mmekọrịta na Mars.
Lelee ụdị 3D nke ụgbọ ala scout ma soro ụzọ ha.
Were njem nlegharị anya nke saịtị ọdịda, nke ndị astronauts nke Apollo Programme kọrọ.
Lelee ụdị 3D nke ụgbọ mmiri ọrụ ụgbọelu.
Etu esi etinye Google Earth na Ubuntu 18.04?
Iji tinye Google Earth na kọmputa anyị anyị ga-ebu ụzọ wụnye ụfọdụ dependencies ndị dị mkpa maka ọrụ nke ngwanrọ na kọmputa anyị. Kedu ndị na-esonụ, ndị a ka anyị ga-ele anya na nkwado nke Synaptic:
Ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ị nwere ike ime ya site na njedebe na iwu ndị a:
Agbanyeghị na ngalaba Ubuntu bụ naanị 64-bit, ndị agbata obi ya dịka Xubuntu ma ọ bụ Kubuntu gara n'ihu na-akwado sistemụ 32-bit, yabụ anyị na-ekerịta ndabere nke sistemụ ndị a.
Maka ikpe nke 32-bit usoroTupu ịmalite usoro ahụ, wụnye ọba akwụkwọ 32-bit nke ihe omume ahụ chọrọ site na iji kọmputa ede iwu na-esonụ na ọnụ.
Emere nke a ugbu a ma ọ bụrụ na anyị ebudata ịdabere na:
Ugbu a, anyị dị na-aga ukara website nke oru ngo na ibudata ụgwọ ngwugwu na ha na-enye anyị, na njikọ bụ nke a.
Ozugbo nbudata ahụ mere, anyị nwere ike iwunye ngwa ahụ na njikwa ngwugwu anyị masịrị ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ na ị nwere ike mepee ọnụ ma mee iwu ndị a:
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, wụnye usoro ihe omume na iwu:
Na nke ahụ, anyị ga-enwe mmemme arụnyere na sistemụ anyị, naanị anyị ga-achọ ya na nchịkọta ngwa anyị, ha ga-echeta na ha nwere ike iji ụbọchị 7 n'efu nke Google na-enye iji nwalee ọrụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Wụnye Google Earth na Ubuntu 18.04 na nkwekọrịta
"Google Earth bụ mmemme nke m nwalere ..."
Echere m na ọ bụ njehie nke akpaghị aka mere, mana ebe ahụ ọ kwesịrị itinye "na-enye".
Ndewo, emere m usoro niile iji wụnye Google Earth na Ubuntu 18.04, nke a bụ akara ngosi mana enweghị m ike ịnweta ya ka ọ gbaa ọsọ, ekele na ekele
Zaghachi Cosme Guevara
Daalụ maka post !! M soro usoro na ọ na-arụ ọrụ ezi.
Adreesị nke ndị na-adabere na-enye Njehie 404, ọ nweghị ụzọ ọ ga-esi nọgide na-ele
Zaghachi Adolfo Hernández
Wụnye VirtualBox na Ubuntu 18.04 LTS na nkwekọrịta
Fọdụ Iwu Ndị Dị na Newbie ọ bụla Kwesịrị Learnmụta